पारस शाहले चढ्ने बाईकको मूल्य कति ? थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/पारस शाहले चढ्ने बाईकको मूल्य कति ? थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ !
पूर्वयुवराजधिराज पारश शाहलाई हेल्मेट नलगाई नशालु हालतमा असुरक्षित तवरले मोटरसाइकल कुदाएपछि हिजो साँझ प्रहरीले समातेको छ । काठमाडौं महाराजगञ्जको चक्रपथ चोकमा हेल्मेटबिना हार्ले ड्याभिड्सनको मोटरसाइकल कुदाएका उनी सद्दे हालतमा समेत देखिएका छैनन् ।
आफूले कहिल्यै हेल्मेट नलगाउने जिद्दी गरेका पारस आज पनि लामै कपालमा प्रहरीसँग दोहोरो सवाल जवाफमा उत्रेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘म कहिल्यै हेल्मेट लगाउँदिन ।
’पछि जम्मा भएका केही मोटरसाइकलवालाले पारसलाई ‘सरकार’ भन्दै बाइक चढाएर बिना हेल्मेट निर्मल निवास पठाएको छ । उनले चढ्ने बाईकबारे चासो बढेको छ । केही समयअगाडि पूर्वयुवराज पारस शाहको एउटा भिडियो भाइरल बन्यो। त्यो भिडियोमा केही स्थानीयले उनलाई ‘हामी तपाईंको कार्यकर्ता हौं, हामी राजावादी हौ’ भन्दै थिए।
उनले चढेको यो मोटरसाइकल हार्ले डेभिड्सनको सफटेल हेरिटेज १९९५ मोडल हो। यो बाइक हाल नेपालस्थित नेपालको शोरुममा उपलब्ध छैन।
उक्त मोडलको मोटरसाइकल नेपाल ल्याइएमा ८५ देखि ९० लाखसम्म पर्नसक्ने हार्ले डेभिड्सन मोटरसाइकलको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक आईएमई अटोमोटिभ्सका म्यानेजर महेश थापाले जानकारी दिए।